Batanidza yako account yeSpotify naShazam kuti uteerere kuimba kuzere | IPhone nhau
Batanidza account yako yeSpotify naShazam kuti uteerere nziyo dzakazara
Alejandro Cabrera | | IPhone maapplication, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Chirongwa Shazam yeIOS inouya nekwaniso yekubatanidza yako Spotify account saka iwe unogona kuteerera kumumhanzi unoiswa mukati meSpotify zvakananga kubva kuShazam app. Kugadziridza kuchangobva kuitika kuapp kunosanganisira kunyorazve zvakakwana chinhu ichi, kuchiita kuti chigadzikane kupfuura nakare kose
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kubatanidza yako Spotify account neiyo Shazam app, uye iyo app ichatarisira zvakasara, izvo inokutendera iwe kuteerera kune yakazara nziyo muShazam panzvimbo pemasekondi makumi matatu chete rwe rwiyo.
Muchidzidzo ichi, tiri kuzokuratidza maitiro ekubatanidza yako Spotify account neiyo Shazam app pane iOS.
1 Sei uchibatanidza Spotify naShazam?
2 Maitiro ekubatanidza yako Spotify account yeiyo iOS neiyo Shazam app
3 Zvimwe zvakanaka zvekubatanidza Spotify neShazam
Sei uchibatanidza Spotify naShazam?
Kana iwe ukashandisa Shazam neSpotify pane yako iPhone, iPad, kana iPod touch, ipapo ungangoda kubatanidza vaviri kuti vatore mukana wekutonhorera maficha mune iyo Shazam app. Iwo maviri maficha vane kuvaka-mukati mashandiro umo mavanobvumidza masevhisi maviri kutaurirana.
Paunobatanidza yako account yeSpotify kubva mukati meiyo Shazam app, urikupa Shazam kugona kutamba mimhanzi kubva kuSpotify account yako zvichibva pane nziyo dzawakamaka, zvinoreva kuti mushure mekunge watsvaga rwiyo, unogona kutanga kubva ipapo kusvika ridza rwiyo rwese kubva kuShazam usinga fanirwe kuchinjisa iyo Spotify app.
Kune rimwe divi, hauna kuganhurirwa kumasekondi makumi matatu ekuratidzwa kwenziyo, uchakwanisa teerera rwiyo rwose kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, izvi zvinopa iyo Shazam app chiitiko chakazara kwazvo mushure mekutsvaga rwiyo.
Ehezve, bakoat ndiyo Spotify Premium kunyorera kunodiwa kuteerera nziyo dzeSpotify, asi izvi zvimwe hazvisi kuzove dambudziko kune vazhinji vashandisi veSpotify.
Maitiro ekubatanidza yako Spotify account yeiyo iOS neiyo Shazam app
Iye zvino zvauri kuziva nezve mabhenefiti ekubatanidza izvo zviviri zvinoshandiswa, uri kushamisika kuti ungazviita sei. Neraki, maitiro acho haana kunyanya kuoma, uye isu tinokuratidza maitiro ekuzviita mune anotevera matanho.
1 Step: Vhura iyo Shazam app uye tinya pane "My Shazam" tebhu pazasi peapp.
2 Step: Dzvanya pane bhatani reZisarudzo kurudyi kumusoro kwesicelo kuti utange iyo Shazam yekumisikidza pani.
3 Step: Dzvanya pane bhatani «Unganidza kuna Spotify» muchikamu «Mumhanzi mukutenderera».
4 Step: Dzvanya pabhatani rebhuruu "Enderera" kana uchikurudzirwa kubatana neSpotify.
5 Step: Iyo Safari application inomhanya pane yako kifaa uye kurodha Spotify rekupinda saiti, tinya pane girini bhatani «Login to Spotify».
6 Step: Pinda neakaundi yako Facebook account, kana neSpotify yako yekuwana data, tinya pane "Bhatani" bhatani.
7 Step: Kana yako yekuwana ruzivo iri echokwadi, inokupa iwe meseji inoratidza kubudirira mune manejimendi.
Pazasi pane muenzaniso wekuti iyo Spotify icon ichaonekwa sei pane bhatani rekutamba:
Zvimwe zvakanaka zvekubatanidza Spotify neShazam
Rimwe bhenefiti rekubatanidza Spotify neShazam nderekuti kana iko Spotify chikumbiro chikatangwa pane yako iOS chishandiso, iwe uchaona runyorwa nyowani rwunonzi «Zvangu Zviratidzo zveShazam»Izvo ine mimhanzi yese yauchangobva kumaka.
Ichi chinhu chinonyanya kukosha nekuti pachinzvimbo chekuenda kuSpotify uye nekuwedzera idzi nziyo kumatamba ako ekuverenga nemaoko, Shazam achakuitira, uye uchave uine kuwana pakarepo mimhanzi yako yaunofarira nguva inotevera paunotanga iyo Spotify application.
Izvi zvinoshanda mune zvese yemahara vhezheni uye yakabhadharwa Shazam app, asi rangarira izvo kunyoreswa kwemwedzi kweSpotify Premium kunodiwa kuti uterere kune dzese nziyo kubva kuApp Shazam.
Mumhanzi unochengetwa muSpotify playlist pane nhare zvakare unoonekwa mune desktop desktop kana iwe ukashandisa Spotify pakombuta yako, saka iyi ndiyo imwe mukana weiyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Batanidza account yako yeSpotify naShazam kuti uteerere nziyo dzakazara
SoundHound inobvumidza zvakafanana asi ichiridza rwiyo kubva kuYouTube, saka hazvidi kunyorera kuti uteerere rwiyo rwese rwatinoona neSoundHound. Sezvenguva dzose, teerera kumasekondi makumi matatu ayo iTunes preview inopa.
Apple inoburitsa yechitatu beta yeIOS 9.3
Chiitiko changu neIOS 9.3 betas kusvika parizvino